Ukuphakama komhlaba okuphezulu kwe-vinyl - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ukuphakama komhlaba okuphezulu kwe-vinyl
Hlela: UDenny　2019-12-04　Iselula
I-high-end vinyl flooring (LVF) yigama elisha elihlanganisa amathayela we-vinyl mbumbulu wamatshe we-vinyl (LVT) kanye ne-high-end vinyl mbumbulu yokhuni flooring (LVP). Ukukhetha kwesigaba esihambisanayo kukhombisa i-aesthetics ehlukile. Abanye abantu bathanda isitayela se-limestone noma semabula yaphansi ye-LVT, futhi abanye abantu bathanda isitayela sePapua ebony noma isitayela se-bamboo esishisayo esitezi se-LVP. Izakhiwo zokulungisa nezindleko ezingabizi.
Abaklami bochwepheshe bezokwakha bangabalandeli be-LVT flooring. Ngobuchwepheshe bokucabanga kwedijithali nobuchwepheshe obukhulukazi bokukhiqiza, ukuthungwa kombala waphezulu ngamatshe okulingisa noma okokuklama okuphezulu okwenziwe nge-vinyl komhlaba kungafinyelela imiphumela yangempela efana nempilo, ukuze kungabikho uchwepheshe ongabahlukanisa kusuka ezansi zokhuni noma emathayili
Ngokusho kweWorld Association of Floor Paving Equipment, amandla okuphinda akhiqize ama-hardwood kanye namatshe kusetshenziswa amasu wezithombe asethuthukile kuyisidingo salo lonke uhlelo oluphezulu lwe-vinyl flooring floor. Izendlalelo ezine ezahlukaniswa zihlangene ukuze zenze umkhiqizo wokugcina, okunguhlaka lokuxhaswa lokuqina lwe-vinyl, ungqimba wokupenda we-vinyl, ungqimba lwefilimu enezithombe, kanye nesendlalelo sekhava ephezulu ye-polyurethane noma i-alumina. Ungqimba oluphambili lokuvikela (olwaziwa nangokuthi ungqimba lwe-abrasion noma i-mil ungqimba) lubaluleke kakhulu ekuqiniseni komkhiqizo. Leyo mikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu inesendlalelo engamelana nama-40 mils. Njengamanje, imikhiqizo eminingi eye yathola ukusetshenziswa kwezentengiso isebenzisa ngempumelelo umklamo ongama-20 mil noma ngaphezulu wokugqwala. (Qaphela: iMill nayo ibizwa nge- milli-inch, 1 mil = 25,4 microns)
Ngokombono wemiphumela yokukhanya nokubukwayo, amathayela wamatshe wokulingisa we-vinyl ephezulu nokulinganisa okuphakeme kwe-vinyl ongalingisa itshe lemvelo, zonke izinhlobo zokhuni oluqinile nazo zonke izitayela ze-tile, ngokungangabazeki ezihambisana nezidingo ezifinyelelekayo zempilo yesimanje. Kepha uma uyiqhathanisa nemfashini yayo futhi inemfashini engapheli, ukwakhiwa komhlaba okugcwele futhi kuqinile kakhulu, kulula ukuyihlanza futhi kulula ukuyigcina. Ngenxa yalokhu, angabonakala yonke indawo, ukusuka ekhaya lomlimi e-backcountry kuya ezindlini zikanokusho zomuzi wemfashini.
Ukuphakama komhlaba okuphezulu kwe-vinyl Okuqukethwe okuhlobene
Sithola ukuthi abantu abaningi bafuna phansi ekhishini. Isitayela sidinga iphethini ye-checkered, i-retro, isikwele esimnyama nomhlophe, umbala omnyama nomhlophe, ibhodi yokuhlola i-navy eluhlaza okw...